hamehana ara-pahasalamana ato amin’ny Faritra Analamanga ho fisohana ny fihanaky ny valanaretina covid19, ny mpanao ratsy toy ny niseho tetsy Anosibe tsena. Teo amin’ny elanelan’ny takela-baravarana vita amin’ny vy manidy ny tsena no nisokiran’ny tovolahy kely iray ny fotsimbary amin’ny gony tao anaty tsena. Nihitsoka tao ny tanany ary dia noraisim-potsiny ara-bakiteny izy. Sahabo ho iray kilao teo ny vary efa voasikotra. Anisan’ireo andiana ankizy manao asa ratsy eny Anosibe eny ity zazalahy tratra ity. Ny ray aman-drenin’izy ireo ihany no voalaza fa mivarotra eny manodidina ihany ny entana halatra.